Izenzele phansi iChiefs ilahla amanye amaphuzu | Isolezwe
Izenzele phansi iChiefs ilahla amanye amaphuzu
ezemidlalo / 15 April 2019, 09:10am / MALIBONGWE MDLETSHE
UBernard Parker exinwe uTshwarelo Bereng weBlack Leopards emdlalweni we-Absa Primeirship obuseThohoyandou Stadium, ePolokwane, Isithombe: Kabelo Leputu/BackpagePix
AKUSIKHO nje ukuhlanza ngedela esicocweni se-Absa Premiership okubhekene nabalandeli beKaizer Chiefs ngemuva kokubambana ngo 1-1 neBlack Leopards eThohoyandou Stadium, eVenda izolo ntambama kodwa sekukhona netwetwe lokuqeda ngaphandle kweTop 8.
Iphuzu langoMgqibelo lishiye iChiefs imi ndawonye endaweni yesikhombisa ngamaphuzu angu-37.
Lokhu kuyingozi ngoba isazobanga amaphuzu ayisithuph namaqembu asezithendeni zayo afuna i-Top 8 okuyiBloemfontein Celtic neLamontville Golden Arrows asenaweni yesishiyagalombili neyesishiyagalolunye.
Okunye okubi okwenziwe yiChiefs izolo wukujoyina amaqembu abanga isicoco sokudlala ngokulingana emidlalweni yeligi. Bekuwumdlalo weshumi iChiefs icazelana kuwo amaphuzu.
IChiefs ihambe phambili ngegoli lika-Andriamirado Aro Hasina Andrianarimanana (Dax) odonse ibhola ebeliphakeme kangangedolo engaphandle kwebhokisi ngomzuzu ka-11.
ILeopards ilinganise ngegoli elingqofelwe enethini ngobuchule nangeshodi nguLefa Hlongwane ngomzuzu ka-23.
UDax ushaye igoli lakhe iChiefs isesemgangathweni, iwuphethe umdlalo kodwa zijikile izinto kwazise nelanga belishisa eThohoyandou ebigcwele ichichima. UKhama Billiat nokho ubukeke njengomdlali obeneqhinga lokumelana nokushisa kwaseVenda kwazise nguye umdlali weChiefs obelokhu eqhamuka nemiyakazo eya phambili kanjalo noKabelo Mahlasela.
Bekufanele athole iphenathi uBilliat ngemuva kokumakwa ebhokisini nguKing Ndlovu obesezintini zeLeopards. Unondweba nokho uphundulekile akangabona ukuthi uNdlovu umthintile uBilliat.
NjengoNdlovu odidwe nguDax eshaya igoli noDaniel Akpeyi ubengeke alenze lutho ibhola elingqofwe nguHlongwane, nokho okubukeke sengathi ingxenye yomzimba wakhe ibiwelele emhlabeni ongafanele.
Kuthe noma iChiefs ibiqale umdlalo ngegiya eliphezulu kodwa zaya ekhefini kuyiLeopards elibona kaningana ibhola.
IChiefs isalelwe yimidlalo emine yeligi nowodwa weNedbank Cup.
Emidlalweni yeligi esele izodlala ne-Arrows ngo-Ephreli 23 ekhaya, yiCeltic ekuhambeni ngo ngo-Ephreli 27, ekhaya neFree State Stars ngoMeyi 5 bese ivala isizini ngeChippa United eBhayi ngoMeyi 11. Akubuzwa ukuthi oweChippa kuzobe kungowamagqubu kwazise bazobe bekade bekhiphene inkani kwi-semi final eNedbank khona eBhayi ngo-Ephreli 20.
* Khonamanjalo, iwa libukeka libheke umoya kwiMaritzburg ewashiye wonke amaphuzu kwiHighlands Park emdlalweni we-Absa Premiership eMakhulong Stadium, eTembisa,izolo ntambama, kubika uZAKHELE XABA
Igoli leHighlands lishaywe nguPeter Shalulile esiwombeni sesibili. ITeam of Choice, ehlezi emsileni we-log yePremiership, ingene enkundleni idinga amaphuzu amathathu azokwenza inciphise igebe lamaphuzu amane phakathi kwayo neFree State Stars ekade ibhekene ne-Orlando Pirates izolo ebusuku.
Ukuhluleka ukucosha amaphu izolo kuyifaka kwenkulu ingcindezi yokuthi izame ngakho konke emidlalweni esele okubalwa kuyona eyamaqembu afuna ukuwina isicoco navika izembe.
Emidlalweni emine eyisalele, iTeam of Choice izobhekana nePirates, Black Leopards, SuperSport United neBaroka okuzoba owokuvala isizini ngoMeyi 11 ekuhambeni.
Emdlalweni wayizolo iHighlands iyona esheshe yazinza kodwa iMaritzburg ibikade iqinile emuva.
Ngomuzuzu ka-11 iMaritzburg icishe yathola igoli ngesikhathi uBevan Fransman eshayisana nonozinti wakhe uMarlon Heugh, ibhola lazihambela lodwa kodwa lagcina liphume eceleni kwepali.
Nokho ibhola beliphethwe yiHighlands isikhathi esiningi, izama ngazo zonke izindlela ukushaya igoli kuqala.
Esiwombeni sesibili iHighlands Park, ebuye noMothobi Mvala endaweni kaRichardo Williams, iqhubekile nokufaka ingcindezi kodwa ihluleka uma isifike phambili.
Ngomzuzu ka- 77 uShalulile ushayele iHighlands igoli emuva kokuthi ibhola liwele kuyena kulandela ukushayisana kwabadlali basemuva beTeam of Choice.